Rikoooo.com - Project Airbus A321 engines shut down after takeoff
Project Airbus A321 engines mechie mgbe takeoff
Mbido akwụkwọ a na-agụghị • 9 posts • Peeji 1 of 1
Jikọtara: Abụọ 18 Feb 2017, 18:50
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by JanneAir15 » Abụọ 19 Feb 2017, 07:55
Nnọọ! Achọtala m Airbus A320 Family Mega Pack. Anwalewo m ụdị ihe niile (A318, A319, A320, A321) mana mgbe m na-ewepụ A321, ụgbọelu ya mechiri ozugbo ozugbo wiil ga-apụ n'ala. Atụmatụ ndị ọzọ nke mkpọ a enweghị nsogbu a ọ bụ nanị na A321. Esoro m nyocha ahụ ma weghagharịa engines na usoro ziri ezi. Amaghị m ihe dị njọ mgbe ahụ. Biko nyere m aka na nke a.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Gh0stRider203 » Abụọ 19 Feb 2017, 08:35
Enweghị m ike ime ọtụtụ ihe dịka m nọ n'etiti ụgbọ elu ka anyị na-asụ (LFRG - KDFW) na 747-400LCF, ma ozugbo m rutere, m ga-ebudata ya ma lee ya anya.
Jikọtara: 28 Nọvemba 2009, 08:55
Kacha eji simulator: FSX
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Tonny0909 » Abụọ 19 Feb 2017, 10:50
Ịkwesịrị ịtọ ELAC2 Gbanyụọ na FLT CTL- ngalaba na panel elu. Ndị ọzọ atọ edoziri ON. (Sec 2,3 na FAC2)
Na-amụta Airbus ụgbọ elu Iwu:
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by JanneAir15 » Abụọ 19 Feb 2017, 11:56
Daalụ nke ukwuu! M ga-anwale nke ahụ.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by JanneAir15 » Abụọ 19 Feb 2017, 12:23
No, it didn't worked. I still got the same error "Generator 1, Generator 2 and Hydraulics 1#2" are marked red on the info display.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by JanneAir15 » Abụọ 19 Feb 2017, 13:39
Ọ dịghị mkpa ka ị nyere aka ọzọ! M edozi nsogbu ahụ. Tonny0909, ị dị mma ma ELAC2 bụ naanị FLT CTL gbanwere ị ghaghị ịhapụ. Mgbanwe ndị ọzọ ị ga-enwe! (tinyere akụkụ aka ekpe nke panel elu) Nke ahụ bụ ya! Ma ekele maka enyemaka gị Tonny0909.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Tonny0909 » Abụọ 19 Feb 2017, 14:50
Mma m kwuru na na m mbụ post:
"Other three set ON. (Sec 2,3 and FAC2)"
They are on when "OFF" isn't indicated.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » Abụọ 19 Feb 2017, 15:39
Na-enwe obi ụtọ ịhụ nke a edozi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị mara.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Gh0stRider203 » Abụọ 19 Feb 2017, 19:11
Dariussssss dere, sị: Na-enwe obi ụtọ ịhụ nke a edozi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị mara.
M nke abụọ!
OTU na-ekele gị maka Tonny0909 maka enyemaka ya!
9 posts • Peeji 1 of 1